တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကိုပြူးကျယ်သို့ ပေးစာ … အပိုင်း (၁၁)
Posted by မေဓာဝီ at 5:13 AM
စကြာတေးတပ် ရေးဟန်ကို တော်တော်လေး သဘောကျတယ်ဗျာ။ ဒါနဲ့ အဲဒီ စကြာတေးထပ်မှာ စာကြောင်းရေ ဘယ်လောက် ဖြစ်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာမျိုး ရှိသေးလား။ အချိန်အားရင် စကြာတေးထပ်ပုံစံ စမ်းရေးကြည့်မှပဲ။ ပေါက်ကရတွေ ထွက်လာမလားတော့ မသိ။ :D
တေးထပ်ကို မရေးတတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အလွန်နှစ်သက်ပါသည်။ ဆရာတွေကတော့ ပြောကြ ပါတယ်။ စမ်းကြည့်သင့်တယ်တဲ့။ မလုပ်ဖြစ်ပါ။ ပါဠိဂါထာများကိုတော့ “စကြာလည်” ရေးတတ်ပါသည်။ ကြုံတဲ့အခါ အားပေးပါဦး။ (တစ်ခါထဲ ad ပါပြီးသွားအောင်ပါ)
တေးထပ်ဆိုလို့လားမသိဘူး။ နှစ်ခါထပ်သွားတယ်။ (မတော်လို့ပါနော်)၂
nothing.. ထပ်သွားတာလေးရီရတယ်.. အဟိ..
ကျနော်ကတော့ ဖတ်ဖို့ပဲတတ်တယ်ဗျာ.. ဒါတောင် မနည်းဖတ်ယူနေရတာ။ ဒါတွေ အချိန်ကုန်ခံပြီး တင်ထားပေးတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျား။
ကိုသံလွင် …. စကြာတေးထပ်မှာ ရှိရမယ့် စာကြောင်းရေက ဟိုးအရှေ့မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ တခြားတေးထပ်များ နည်းတူ အပိုဒ် ၁၈ ပိုဒ် ရှိရပါမယ်။ စပ်နည်းကတော့ မြင်လွယ်ပြီမို့ စာအုပ်မှာလည်း ဖော်ပြမထားပါ။
ကိုနတ္ထိ … ဘလော့ကို သွားကြည့်ပြီးပါပြီ။ ပါဠိဂါထာတွေ ရေးဖွဲ့ထားတာ ဖတ်ရပါတယ်။ ကျမစက် အယ်ရာတက်နေလို့လားမသိဘူး အစအဆုံးဖတ်မရပါဘူး။ ကွန်မန့်လည်း ရေးမရပါ။
ကိုနတ္ထိများ ဖတ်ချင်မလားလို့ … ကျမ ရိုက်ဖို့လည်းပျင်း, နားလည်း မလည်တာနဲ့ ချန်ခဲ့တဲ့ ပါဠိတေးထပ်ကို ဒီကွန်မန့်ထဲမှာပဲ ရေးထည့်လိုက်ပါတယ်။ (အဓိပ္ပါယ်သိလို့ ရှင်းပြမယ်ဆိုရင် အလွန်ဝမ်းသာ မိမှာပါပဲ)
ကနိဋ္ဌ-သောအဟံ၊ သီတလံ-အဘိရမာ မျ။
ခမာနိ-ဘောဇနေ၊ ရိယ ပထေ၊
ရောစေမိ-ယံပဏ္ဏေကို၊ ဘဒ္ဒန္တေ-မိတ္တ ပေဿး။ … ။
ကိုသန့်ဇင်အောင် … လာဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
လာဖတ်ပြီး နှစ်သက်ကြမယ်ဆိုရင် ကျမ အချိန်ကုန် ခံရကျိုးနပ်ပါပြီ။
thanks , i never see like that .
3/29/2007 9:01 AM
ဘာတုကော-အစ်ကို။ဘော မိတ္တ- အို မိတ်ဆွေ။ သြသိဉ္စ-သွန်းလောင်း။ နိစ္စာ-အမြဲ။ သြဒိဿ-ရည်စူးသော။ အာနုဘာဝေန- အာနုဘော်ကြောင့်။ ကနိဋ္ဌ-ညီငယ်။ သောအဟံ- ထို..ကျွနုပ်။ သီတလံ-အေးအေးချမ်းချမ်း။ အဘိရမာမျ-မွေ့လျော်ပါ၏။ ဆန၀- ၉၆ပါး။ အန္တရာ-ဘေးအန္တရယ်။ ဒူရ- အဝေး။ ၀ိမုတ္တာ-လွတ်မြောက်။ တသ္မာ-ယောစ-ထို့ကြောင့်သာလျှင်။ ဣစ္ဆိတံ-အလိုရှိအပ်သော။ သဗ္ဗံ-အာလုံး။ ပိဋကံ- ပိဋကတ်။ ယံသိပ္ပ-အတတ်ပညာ။ ပုနပ္ပုနံ-ထပ်ခါထပ်ခါ။ ပဂုဏ-ကျွမ်းကျင်။ မန္တလေး-နဂရံမှာ-မန္တလေးမြို့။ ၀သနံ-နေထိုင်။ ရမာမိစ-မွေ့ပျော်။ ခမာနိ-အဆင်ပြေ။ ဘောဇနေ-စားစရာ ။ရိယပထေ-အနေအထိုင်။ ရောစေမိ-နှစ်သက်၏။ ယံပဏ္ဏေကို- ယင်း စာလွှာကို။ ဘဒ္ဒန္တေ-အရှင်မြတ်တို့။ မိတ္တ-မိတ်ဆွေ။ ပေဿး-ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
သြဒိဿ-ရည်စူးသော။(မေတ္တာငယ်-မေတ္တာ)။ အာနုဘာဝေန- အာနုဘော်ကြောင့်။
4/05/2007 8:05 AM
ခုလို အဓိပ္ပါယ်ပြောပြပေးတဲ့ ကိုနတ္ထိကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
4/05/2007 8:09 AM